Uthembisa ukuthi bazozikhandla sebebhekene neSimba 'abangayazi kahle' oweChiefs - Impempe
Uthembisa ukuthi bazozikhandla sebebhekene neSimba ‘abangayazi kahle’ oweChiefs
Okuhlalukile ngeKaizer Chiefs kuleli viki wukuthi ayiyazi kahle iSimba SC ezobhekana nayo emdlalweni weCAF Champions League eFNB Stadium ngoMgqibelo ngo-6 ntambama. Lokhu kuvele ngesikhathi abadlali bayo, oNjabulo Blom noReeve Frosler bekhuluma ngalo mdlalo obalulekile kuMakhosi.
UBlom uthe yena uthole ulwazi ngaleli qembu kwi-Instagram alibheke kuyo ngemuva kokuqhathwa kwabo nalo emavikini amabili edlule (nalu udaba: https://bit.ly/2RWEOQh). UFrosler naye ukuvumile ukuthi usizwe yi-internet ukuthola ulwazana ngaleli qembu laseTanzania elime endleleni yabo.
“Ngesikhathi kuqhathwa amaqembu sithola ukuthi sizobhekana neSimba, mina bengingazi lutho ngayo,” kusho uFrosler. “Kodwa ngemuva ngokufunda ngayo nokuyibheka kwi-internet, ngithole ukuthi bayiqembu elilokhu lenza kahle kwiChampions League kule minyakana edlule.
“Bayiqembu elikhulu eTanzania. Sengikubheke ngabomvu ukubhekana nabo. Bazoba yinselelo entsha kithi, kodwa siyilindele,” kusho lo mdlali oneminyaka engu-23. Nokho uyafunga uyagomela ukuthi yize bengenalo ulwazi olutheni ngalezi ziha zabo, bazokwenza okusemandleni ukuzisunduza endleleni yabo.
“Ngicabanga ukuthi sesibalungele. Akekho obazi ngathi uma kukhulunywa ngesipiliyoni emidlalweni yeCAF. Besingabhekwe muntu futhi namanje kusenjalo kodwa sizoqhubeka nokuzikhandla.
“Ngeke wazi, njengoba cishe sekuke kwabonakala kule midlalo yeCAF, ayiqageleki futhi kungawina noma wubani. Ngakho ngeke sazi kuzokwenzakalani.
“Siphuma emdlalweni onzima ngoLwesithathu futhi sibe nesikhathi esincane sokuziungiselela. Ukudlala kwiCAF akufani nokudlala kwiligi yakuleli ngakho kumele sihlele ngendlela ehlukile…
“ISimba isheshe yafika kuleli. Babe nesikhathi sokuzijwayeza isimo sezulu futhi kufanele ukuthi basibukile sidlala ngoLwesithathu. Kodwa akufani – iCAF nePSL kuhlukene kakhulu.
“Sizozikhandla. Uma umdlali ngamunye ewakhipha wonke amangwevu akhe futhi sibambisana, kungenzeka noma yini,” kucacisa uFrosler. IChiefs izodinga ukunqoba kulo mdlalo ukuze izibeke ethubeni elingcono uma seyiya emelnzeni wesibili eTanzania la kuzobe kunabalandeli enkundleni.
Previous Previous post: UMngqithi ukufanise nokubhala izivivinyo zokugcina ukubhekana ‘nothisha wabo’ uMosimane
Next Next post: Ubazi kahle ubungozi beSundowns uMosimane